ဖျာပုံခရိုင်ရှိ စွန့်ပစ်ပုစွန်ကန်နေရာများတွင် သြစတြေးလျ Queensland တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ?? - Yangon Media Group
ဖျာပုံခရိုင်ရှိ စွန့်ပစ်ပုစွန်ကန်နေရာများတွင် သြစတြေးလျ Queensland တက္ကသိုလ်နှင့် ပူးပေါင်းပြီး ??
ရန်ကုန်၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၆- ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ဖျာပုံခရိုင်အတွင်းရှိ စွန့်ပစ်ပုစွန်ကန် နေရာများကို သြစ တြေးလျနိုင်ငံ Queensland တက္ကသိုလ်နှင် ပူးပေါင်းပြီးဒီရေတောများ ပြန်လည်တည်ထောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သစ်တောဦးစီးဌာန၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက် တာတိုးတိုးအောင်က ပြောသည်။
ဖျာပုံခရိုင်တွင် စွန့်ပစ်ပုစွန် ကန်များနေများကို ဒီရေတောများ ပြန်လည်စိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဒေသခံများ အတွက် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ငါးမွေး မြူရေးလုပ်ငန်းများကိုပါ ပူးတွဲလုပ် ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ဒေါက်တာတိုးတိုးအောင်က ”စွန့်ပစ်ပုစွန်ကန်တွေကို နည်းပညာ အသုံးပြုပြီး ဒီရေတောပြန်လည် စိုက်ပျိုးသွားမယ်။ စီမံကိန်းကာလသုံးနှစ် လုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘောတူညီချက်လက်မှတ်လည်း ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် နှစ်မှာစီမံကိန်းကို စတင်သွားမှာ ဖြစ် ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဒီရေတော များမှာ ငါးကန်ပုစွန်ကန်များချဲ့ထွင်မှု၊ အလွန်အကျွံထုတ်ယူသုံးစွဲမှု၊ လယ်ယာမြေများချဲ့ထွင်မှု အပါအဝင် သဘာဝဘေးဒဏ်များကြောင့်လည်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဖြစ်ပေါ် နေပြီးတစ်နေ့တခြား ဒီရေတော များလျော့နည်း လာနေကြောင်း သိ ရသည်။
ဒေါက်တာတိုးတိုးအောင်က ”ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အတွင်း မှာ ဒီရေတောတွေ ပြန်လည်ကောင်း မွန်လာဖို့အတွက် သစ်တောဦးစီး ဌာနအနေနဲ့ စီမံကိန်းချမှတ်ပြီး ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ဆက် လက်ပြောသည်။
ဒီရေတောထိန်းသိမ်းရေးသည် အလွန်အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်း စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဒီရေတောများ သည် ယင်းနှင့်ဆက်စပ်တည်ရှိရာ သော သန္တာကျောက်တန်းနှင့် အဏ္ဏဝါ ဂေဟစနစ်များ၏ တည်ငြိမ်မှုနှင့် ရှင်သန်ရပ်တည်မှုအတွက် အရေးပါ သည့် ဂေဟစနစ်ဖြစ်ပြီး ကုန်းနေ၊ ရေနေသတ္တဝါနှစ်မျိုးစလုံး မှီခိုကျက်စားနိုင်သည့်ထူးခြားသည့် ဂေဟ စနစ်ဖြစ်သည့်အပြင် ကမ်းရိုးတန်း ဒေသများအား မြေပြိုတိုက်စားမှုနှင့် လှိုင်းဒဏ်လေဒဏ်ခံစားရမှုမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း(သို့) လျော့နည်းစေ ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးခြင်း ကြောင် ဒီရေတောထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ငန်းများသည် အရေးကြီးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင်နှစ်တွင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ရှစ်သောင်းကျော်ကို နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြ
ကန်သမ္မတထရန့်၏ ဂျေရုစလင်ကြေညာချက်အပေါ် တုန့်ပြန် ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့
ကလေးဝ၌ ပေ ၆ဝဝ ကျော် အနက်ရှိ ကျောက်မီးသွေး မိုင်းတွင်း ပေါက်ကွဲ၊ တရုတ်ကျွမ်းကျင် လုပ်သားတစ်ဥ
တောင်ကိုရီးယား တရားရေးဌာန ထိပ်တန်း ဝန်ထမ်းဟောင်းနှစ်ဦးကို ဖမ်းဝရမ်းထုတ်
စာတတ်မြောက်သူတိုင်း စာဖတ်ရေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းမီဒီယာများကို တွေ့ဆုံရှ?